Posted on March 2, 2020 by Qeerroo
Hooggansi ABO hidhamaniiru.
Prof, Isqeel Gabbisaatiin
ABO hidhamaniiru. Kun waan haaraa miti. Hooggansii fi miseensooni ABO erga dhaabni kun hundeeffamee jalqabee ni hidhamu. Wanti kaleessa ta’e akka dhufaa ture akeekkachiifni kennamaa ture.
3) Prezidaantiin MNO Shiimallis Abdiisaa “milla tokkoon ala dhaabatani miilla tokkoon mana keessa dhaabbachuun hin mandamus
Hooggansi ABO duras gaaga’amaafi balaa dhufuuf deemu beekaanii biyyatti galan. Hidhamuu qofaa miti lubbuun wareegamuun akka jiru beekanii qabsootti galan. Wareegamni qabsoo hin guddisa malee hin quuccarsu.
wordi on March 4, 2020 at 1:42 am said:
Dhugaa dubate abii
wordi on March 4, 2020 at 1:43 am said:
Dhuga dubate abii